စာပဒေသာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 513
ရေးခဲ့မိသော မှတ်တမ်းများ – (၁၆)
အုန်းနိုင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ ● ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဓနုဖြူ ၁၉၈၉ ဧပြီလ (၅) ရက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းခရီးစဉ်အတွင်းက ဓနုဖြူမြို့မှာ စစ်တပ်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ် အ ပျက်ကိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့  သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (၄) ထဲကအတိုင်းပဲ ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ဦးကြည်မောင်က မြေပုံနဲ့တကွ ရှင်း ပြပါတယ်။ “တကယ်တော့ ဖြစ်ခဲ့တာက နှစ်ပိုင်းပါ။ ပထမပိုင်းက မနက် (၉)နာရီခွဲလောက်။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးက နယ်မြေ အမျိုးသားဒီမို ကရေ စီ အဖွဲ့ ချုပ် ရုံးခန်းကထွက်လာကာစဖြစ်ပါတယ်..။(မြေပုံပြသည်) ကျနော်တို့တဖွဲ့ လုံး လူငါးဆယ်လောက် ပါပါတယ်..။ဒီလမ်းအတိုင်း ထွက်လာပါတယ်..။မဟာဗန္ဒုလ လမ်းပါ..။အဲဒီနောက် ဒီနေရာမှာ ဘယ်ဖက်ချိုးပြီး သင်္ဘောဆိပ်ကိုသွားတယ်..။အငှားမော်တော် နဲ့ ရွာတွေဘက် ထွက်မလို့ ပါ..။ကျနော်တို့ ...
ေ နွ လု လု ဦး
ကမာပုလဲ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၃ ဆောင်းဟာ နှင်းရုပ်တောင် မပေါ်နိုင်ရှာတော့ … ချောက်တီးချောက်ချက် မြူ အစအန … အက်ကွဲ ပြိုကျနေတဲ့ ဟေမန္တ သရုပ်မှန် ရှုမျှော်ခင်း နှင်းခါးခါး ညတွေကိုမှ လွမ်းလှပါသတဲ့ …။ အိပ်မက်က အသေဖြစ်နေရင် ဘ၀နဲ့ ကင်းကွာနေတဲ့ လူဖြစ်ရှုံးမှုများ ကလေးရယ် … မင်းဟာ ဆာရီရယ်လစ်ဇင် ပန်းချီကားထဲက သက်ပျောက် မန္တာန် တခုသာပ … မင့်နှလုံးသားနဲ့ မင်းအချစ် နီးရက်နဲ့ ဝေးခဲ့မယ် …။ ပျက်ကျမယ့် လေယာဉ်တစင်းပေါ် မင်းရဲ့ တခါက ကတိတွေ စီးနင်းလိုက်ပါသွားပြီလား … ဒီဘ၀ကို အသေအချာ ဒီမျှနဲ့ ကျေနပ်လိုက်ပြီလား … မင့်မုသားက မင့်လျှာကို...
ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ် -‘Walking Through The Wonderland’ and Selected Articles’ ရေးသူ – Junior Win ထုတ်ဝေသူ – Moemaka Media၊ ဖြန့်ချိရေး – Amazon Kindle Online မှာ ဖြန့်ချိ်သည်။ နေ့စွဲ – ၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၃ စာမျက်နှာ – ၁၇၀ခန့် ဆိုဒ် – 2MBခန့် စာအုပ်က အမေဇုံအွန်လိုင်းကနေ ထွက်လာသော ဂျူနီယာဝင်း၏ ပထမဦးဆုံး အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ခွဲခန့် http://Juniorwin-english.blogspot.com နှင့် http://moemaka.org မှာရေးသားဖြစ်ခဲ့သမျှနှင့် တစ်လကျော်ကြာ ပြင်ဆင်ခဲ့ရသောရလဒ်က သည်ebook ထွက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်ကြောငြာကို စတွေ့ခဲ့ချိန်မှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာ...
ထောင်စာပေသမိုင်း မောင်စွမ်းရည်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၃ မျက်မှောက်တေ် ဗမာစာပေလောကမှာ ထွန်းကားပေါ်လွင်တဲ့ စာအုပ်စာပေအမျိုးအစားကို ပြောပါဆိုရင် “ထောင်စာပေ” လို့ ပြောမလား စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ စေ့စေ့တွေးတော့ ရေးရေးပေါ် ဆိုသလို ဗမာစာပေအစ ထောင်စာပေကလို့ ပြောရမလားလို့လဲ အောက်မေ့မိပါတယ်။ ကျနော်တို့ငယ်စဉ် ကျောင်းသားဘ၀က ဗမာစာပေ၊ ဗမာကဗျာသင်လို့ရှိရင် အနန္တသူရိယရဲ့ မျက်ဖြေလင်္ကာဆိုတာက စ သင်ရပါတယ်။ “သူတည်းတယောက် ကောင်းဖို့ရောက်မှု၊ သူတယောက်မှာ ပျက်လင့်ကာသာ ဓမ္မတာတည်း။ ရွှေအိမ်နန်းနှင့် ကြငှာန်းလည်း စံ၊ မတ်ပေါင်းရံလျက်၊ ပျော်စံရိပ်ငြိမ်၊ စည်းစိမ်မကွာ၊ မင်းချမ်းသာကား၊ သမုဒ္ဓရာရေထက် ခဏတက်သည့် ရေပွက်ပမာ တသက်လျာတည်း …” စသည်ဖြင့် ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ကဗျာပါ။ ရှင်ဘုရာက အမျက်ထွက်ပြီး ဖမ်းဆီးထောင်ချရုံမက တောင်စွယ်နေကွယ်လျင်...
ချစ်သူများနေ့ အတွေးများ အရှင်နန္ဒ၀ံသ၊ ဇေယျသုခကျောင်း၊ အမာရီလိုမြို့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၃ • ချစ်သူများနေ့ အတွေးများ စာရေးသူသည် မကြာမီသော ကာလမှာ မိဘဆရာ ညာတကာတို့ရဲ့ မေတ္တာလောင်းရိပ်သို့ ခေတ္တပြန်လည် ခိုဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်လို့နေပါတယ် ……မှတ်မှတ်ရရ အမေရိကန်မှ ခရီးစတင်ထွက်ခွာမည့်နေ့သည်ကား ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်……အများသိသော ချစ်သူများနေ့….. အော် ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်သော မိဘ ဆရာရှိရာ ဇာတိဋ္ဌာနေဆီသို့ ပြန်ရတော့မှာဆိုတော့ ရင်ထဲမှာ ပျော်သလိုလို…. ဒါပေမဲ့ အပျော်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ငြိတွယ်ပါလာတဲ့ အတွေးကတော့ …ဒီလို ချစ်သူများ နေ့မှာမှ မိမိကို ချစ်ခင်လေးစားသူတွေရဲ့ ရင်လွှာကို ခွာချန်ပြီး ဇာတိဆီကချစ်ခင်သူတွေထံ ပြန်ဖို့ စီစဉ်မိလေခြင်းကိုပါ….။ ဟိုး ဇာတိမြေမှ မိမ်ိပြန်လာမှာမို့...
ကမာပုလဲ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂ ၀၁၃ လူတွေ အရပ်ရှည်လာသလို သစ်ပင်တွေလည်း အရပ်ရှည်လာတယ် … ။ လူက အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်သလို သစ်ပင်တွေကလည်း အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တယ် … ။ လူတွေ ရေငတ်သလို သစ်ပင်တွေလည်း ရေငတ်တယ် …။ မိုးခေါင်ရေရှား ရပ်ဝန်းမှာ လူက ရေတွင်းနက်နက်တူးပြီး အသက်ရှင်သလို သစ်ပင်တွေက အမြစ်နက်နက်တူးပြီး အသက်ရှင်တယ် …။ လူတွေက အမိုးအကာနဲ့ အရိပ်ကိုရှာတယ် သစ်ပင်တွေက အကိုင်းအခက်အရွက်တွေနဲ့ အရိပ်ကိုပေးတယ် …။ လူတွေက သစ်ပင်တွေကို ခုတ်ဖြတ်သတ်တယ် သစ်ပင်တွေက လူတွေကို ခုတ်ဖြတ် မသတ်ခဲ့ဘူး …။ လူတွေက မတူကွဲပြားတဲ့ ဘာသာတရားတွေမှာ ကိုးကွယ်မှုကျွံရင်း အချင်းချင်း ရန်သတ်ကြ၊ သစ်ပင်တွေက သစ္စာတရားကို...
ဖေဖေါ်ဝါရီဆုတောင်း (Shwe Let Yar Taw)
ဖေဖေါ်ဝါရီဆုတောင်း ရွှေလက်ယာတော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ မေးတန်းလန်းနဲ့ အမြဲငေးငေး နေရတဲ့ မြို့လေးကနေ သင်တို့ကို ငါတမ်းတလိုက်မိပါရဲ့……။မိတ်ဆွေတို့…………………………………… စာအုပ်ထူထူကြီးတွေကို တရှိုက်မက်မက်၊ ခုံခုံမင်မင်ရှိလှတဲ့ လူငယ်လေးတွေဟာ တောအုပ်ထူထူကြီးတွေထဲကို ဘာကြောင့်ရောက်သွားရတာလဲ….. ငါမဖြေဘူး…. သင်လည်းမဖြေနဲ့… သမိုင်းကဖြေလိမ့်မယ်… အချိန်တော့လိုတာပေါ့။မိတ်ဆွေတို့…. ဒေါင်းပျိုတွေ မြူးတဲ့တောမှာ ၀ဲကတော့တွေကို ဘယ်သူတွေက ပစ်ချသွားကြပါသလဲ… သမိုင်းကဖြေလိမ့်မယ် အချိန်တစ်ခုတော့ ပေးကောင်း ပေးရမှာပေါ့။ မိတ်ဆွေတို့……………. မိဘတွေအိပ်နေချိန်မှာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ အိပ်ပျော်နေချိန်မှာ… မှောင်ရိပ်ကနေ တိတ်တဆိတ်နှုတ်ဆက်… ခြေသံကိုဖွဖွနင်းပြီး ……………….. သူတို့တွေ ခရီးထွက်ခဲ့ကြဖူးတယ်။ ခြေလှမ်းတွေတိုင်းမှာ ပန်းတွေမပွင့်နိုင်ဘူးဆိုတာ သူတို့နားလည်ခဲ့ကြပါတယ်………………။ ကြောက်လို့ပြေးတာမဟုတ်.. ခြောက်လို့ပြေးတာမဟုတ်… ခံယူချက်တစ်ခုနဲ့… အမိမြေကိုပေးဆပ်ဖို့ အတွက်… လူငယ်ဆိုတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ဘ၀ကို သူတို့ပုံအောပြီး ပေးပစ်လိုက်ကြတယ်။ သည်ကဗျာဟာ ဘုန်းတော်ဘွဲ့ကဗျာမဟုတ်ပါဘူး…. နောက်ပြီး.....
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၂ … ကျိန်စာ
ကမာပုလဲ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမေဟာ အမေပါပဲ … တဲ့။ ဘယ်လို လူဖြစ်ခွင့်လဲ ပြည့်တန်ဆာ ခေတ်ကြီးမှာ လူမဖြစ်ချင်ပါဘူး မေမေ …။ သိဒ္ဓတ္ထလည်း ပြည့်တန်ဆာ ကျေးကျွန်လူတန်းစား အတွက် လွတ်မြောက်ဖို့ကို ဆောင်ကျဉ်းတိုက်ယူမပေးနိုင်ရှာခဲ့သူ …။ ပြည်ထောင်စုနေ့တဲ့ မဟာ လူမျိုးကြီး ၀ါဒအောက်မှာ ကျီးလန့် အစာစားနေရတဲ့ ခေတ်ပျက်ကြီး လက်ရှိမှာ … ဗမာပြည်ရဲ့ အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးဟာ လူတကာ အညစ်အကြေးတွေ ပေကျံနေတဲ့ မိန်းမရွင်တယောက်ရဲ့ ထမီစုတ် တထည်သာ။ ။ (ဗမာပြည် … ပြည်ထောင်စုနေ့ … ၂၀၁၃) No tags for this post. Related posts...
ငြိ မ်းေ ရးခ ရီးရှ ည် ချီ တ က်နေ သူ များ သို့( ၃ ) (Aung Way)
LONG WALK TO PEACE OUR JOURNEY IS NOT COMPLETE ငြိ မ်းေ ရးခ ရီးရှ ည် ချီ တ က်နေ သူ များ သို့( ၃ ) အောင်ဝေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ ရဲဘော်တို့ - ခြေထောက်တွေကို ရွက်လွှင့် ဇော်ဝင်းထွဋ်လို ရွက်လွှင့်။ ကျည်ဆန်များအစား ပန်းများပွင့်စေ။ သေနတ်သံဆိတ် သူငယ်အိပ်စေ။ ငါတို့ ခေတ်မှာ...
Page 513 of 578«1...511512513514515...578»
ငမိုဃ်း ● ဆီးရီးယား
လှကျော်ဇော - ကျေးဇူးရှင် မွေးမေမေများသို့
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲများကို စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ခြင်း - အပိုင်း (၉)
ထိုင်ခုံ အလွတ်တွေ - လျူရှား (မျိုးတေဇာမောင် ဘာသာပြန်)